Chii chinotarirwa neGoogle kana chinouya kuHQ backlinks?
Usati watanga kutarisa mukati maHQ backlinks kubva maonero eGoogle tsvakurudzo yekutsvaga, ngatitange nemamwe tsanangudzo dzinokosha. Chii chinonzi backlink che SEO chinangwa? A standard backlink is a link linking back to you from third party party or blog. Dzimwe nguva backlinks inonzi "inouya" kana kuti "inbound" links. Chero chii.
Izvo zvakakosha kumashure zvinonyanya kukosha here?
Nei kunyanya HQ backlinks yakakosha pakufambira mberi kweEOO, uye pakupedzisira - kuzviwana pakati pezvimwe zvinowanikwa mhinduro gumi? Izvo zvakasimudzirwa shure zvakagadzirwa zvakarongeka zvinoonekwa neGoogle se "vhoti" yekuvimba uye kuvimba muhutano hwewebsite yako kana bhudziro uye kukosha kwechokwadi. Nenzira iyo, Google inotora zvose backlinks muhutano hwako hwekubatanidza - kupa rimwe peji rewebhu mazita ayo anokosha (anozivikanwawo se PageRank) - code bonus vive mon casino. Kana tangoita zvinhu zvishoma zvakajeka, regai tione zvinotaridzirwa neGoogle - kana zvasvika kune HQ backlinks kunyanya. Pasi pane huwandu huwandu hunotsigirwa netsanangudzo shoma kuti ikupe mufananidzo mukuru.
Nezvemasikirwo emasikirwo ehupamhi hwepamusoro, pano ndizvo zvinonyanya kuonekwa neGoogle:
Mazita emunhu mumwechete anotaura nezvewebsite yako kana bhurogi (iyo inonyanya kukosha muGoogle yakanyanya kutsvaga kutsvaga algorithm).
Chigaro chebhuku kana peji yepawebhu, iyo inonamatira kumashure yako yepaiti kana bhulogi iriwo pakati pezvinhu zvinokosha zveHQ backlinks (kureva., Masangano mashomanana ane simba rakasimba zvikuru anogona kupfura nyore chero sarudzo yakawanda yepasi- unhu hwakanaka).
Chiremera chinowanikwa mumaziso eGoogle ibhuku rewebhu kana bhulogi rinovimbwa nevese-vashandisi, nyanzvi dzemabhizimisi, mamwe mawebsite, uye mabloggi, pamwe chete nemichina huru yekutsvaga ivo pachavo.
Kuwedzera HQ kumashure kwawakakwanisa kuumba muviri, zviri nani.
Aged domain websites kana blogs dzimwe nguva zvinogona kuonekwa zvakakosha, panzvimbo ye backlinks kubva panguva isati yaedzwa.
Sangano rinobva kune imwe nzvimbo inobatsira uye inoshandiswa nemabhizimisi zvichange iine uwandu hunoreruka hunogona kuenzaniswa uye hunokosha mu SEO, panzvimbo yeavo vasina chairo chakakosha (chii chinowanikwa - kunge musingabatsiri backlinks chinogona kubata nyore nyore neGoogle sechinhu chinonyengera kana chiito chinonyengera - izvo zvinowanzoita kuti pave nechikwereti chakatarwa kana kunyanya kushamiswa kwemashoko).
Zvinyorwa zvakare kumashure (i.e., izvo zvakawanikwa zvakabatanidzwa mukati mako peji yepakutanga) zvakanyanya kukosha, panzvimbo yeavo vanoiswa mumapapurika akasiyana, widgets, kana zvimwewo kubva mumutauro mukuru.
Kubatanidza maonero ehutano huchaita zvakanaka, sekuve nehutano hwakasiyana-siyana hwemaHQ kubva kune zvakasiyana-siyana zvewebsite uye blogs zvinotarisa zvakasikwa (kureva,, hazvina kumbova nehuwandu hwakawanda hunobva kune imwe nzvimbo - iyo inogona kutarisa spammy iyo injini yekutsvaga).
Chibatanidza zvinyorwa zvinyorwa hazvifanirwe kuregererwa zvakare - ivo vari muchikamu vanofunga kuti Google "inoverenga sei" uye "inonzwisisa" chibatanidzwa (kusvikira panguva iyo, ndinokurudzira kunyatsotarisana nematambo chaiwo echinyorwa anchors, fungidzira kaviri usati washandisa zvakafanana shreds yemashoko zvakagadzirwa zvichida zvave zvichishandiswa nemakwikwi ako.